Marketing ပုန်ကန်မှုကို ဦး ဆောင်ရန်ကူညီခြင်း Martech Zone
ကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့သည် Mark Schaeferကျွန်ုပ်သည်သူ၏အတွေ့အကြုံနှင့်နက်ရှိုင်းသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုချက်ချင်းသဘောပေါက်နားလည်ခဲ့သည်။ Mark သည် ၄ ​​င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုများကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမည်ကို ဦး ဆောင်သည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ငါဟာဒီလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာအရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ယောဂီတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်အမြင်အာရုံရဖို့အတွက်ခေါင်းဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုငါမျှော်ကြည့်သည်။ မာ့ခ်သည်ငါအာရုံစိုက်သောခေါင်းဆောင်များထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ မာ့ခ်သည်စျေး ၀ ယ်ခြင်းတွင်ဝါရင့်ဝါရင့်ဝါရင့်တစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းသူသည်လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်သူ ဦး ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရကြောင်းကိုလည်းသဘောပေါက်သည်။
ငါ့မှာမာကုရှိတယ် Martech Zone podcast အင်တာဗျူးများ, ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာသူ့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးကြီးပွားသတည်း။ သူကသူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ သင်လိုအပ်တာကိုနားထောင်ဖို့သူ့ချဉ်းကပ်ပုံကိုသဘောမကျဘူး။ ကျနော်တို့အပေါ်ပူးပေါင်းခဲ့သည် Dell Luminaries များ Mark နှင့် Dell ၏ B2B Influencer Marketing & Content Creation ခေါင်းဆောင် Konstanze Alex သည် Dell Technologies ၏အမှတ်တံဆိပ်အောက်ရှိအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်စွမ်းရည်ကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်အခွင့်အလမ်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ ငါဒီလို Podcast တခုကိုတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးဘူး၊ မာ့ခ်ကငါ့ကိုသုတေသနလုပ်ဖို့နဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့တယ်။ ငါ့ကိုအခွင့်အရေးယူဖို့သူ့ကိုငါဘယ်တော့မှပြန်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။
မေးလ်ထဲမှအထုပ်တစ်ခုရသောအခါကျွန်ုပ်အံ့သြသွားသည် Schaefer စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Solutions။ box ထဲမှာ contents တွေကိုသို့ပြတင်းပေါက်တစ်ခုက Marketing သူပုန် တံဆိပ်။
ငါ box ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းသက်ဆိုင်တဲ့ trinkets သို့မဟုတ်သဲလွန်စ, ဖြစ်ဟန်သောအရာ၏တစ် ဦး စပ်စုကိရိယာအစုံဖြစ်ခဲ့သည်:
လက်ဆပ်ပြာ - စာမျက်နှာ 9
တစ် ဦး က Westworld အခမဲ့သောက်တိုကင် - စာမျက်နှာ 199
Glossier အရေပြား Salve - စာမျက်နှာ 232
တစ် ဦး ကကျပ်ဆင် - စာမျက်နှာ 232
ကောင်းပြီ၊ ယခုငါစိတ်ဝင်စားနေပြီးအညွှန်း၊ ဝေါဟာရနှင့်တံဆိပ်ကပ်ထားသောစာမျက်နှာများကိုလှန်လှောကြည့်ပြီးဖြစ်သည်။ စာအုပ်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့မာ့ခ်ကလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့စာကိုတွေ့လိုက်ရသည်။
ကျွန်တော့်လက်တော့အတွက်ကိုယ်ပိုင်မှတ်စုနှင့် Marketing Rebel စတစ်ကာပါသောကဒ်တစ်ခုရှိသည်။
လိမ္မာပါးနပ် ... မာကုငါ့ကိုစို့ခဲ့သည်!
သတ္တုတွင်းဖောက်သည်အသစ်ကသူတို့အသုံးပြုသောနည်းဗျူဟာကိုငါ့ကိုမေးခဲ့တယ်။ သူတို့၏အရောင်းအဖွဲ့သည်အလားအလာများကိုဖော်ထုတ်ပြီး၊ တတိယပါတီများထံမှ၎င်းတို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုရယူပြီးမိတ်ဆက်အီးမေးလ်အမြောက်အများကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ သူတို့ကသူတို့ကနိမ့်ကလစ်နှိပ်မှတဆင့်နှုန်းနှင့်သူတို့၏ခြုံငုံပေးပို့နိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသည်ပြောတယ်။ သူတို့ကိုငါပြောသင့်တယ်။ သူတို့ကဒီကုမ္ပဏီတွေကို spamming လုပ်ဖို့လိုတယ်။ သူတို့သည်အလားအလာများကိုစိမ်းလန်းစိုပြေစေပြီးသူတို့ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးကြသည်မဟုတ်ပါ။
မာကု၏စာတမ်းတွင်၊ ဤနည်းဥပဒေသည် ၁ ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီအတွင်းတွင်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့ဖောက်သည်များနှင့်တည်ဆောက်ထားသည့်တန်ဖိုးထားမှုကိုအသုံးချခြင်းတို့အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ကုမ္ပဏီကိုဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ် လူ့.
ငါမှတဆင့်သာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပုန်ကန်မှုဒါပေမယ့်သူနဲ့စကားပြောတဲ့အခါသူကဒီစာအုပ်ရဲ့အရေးကြီးမှုကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်စိတ်အားထက်သန်သလဲဆိုတာကိုအခုကျွန်တော်နားလည်ပါပြီ။ သုတေသန၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသင်တွန်းအားပေးခဲ့သည့်သင်ခန်းစာတိုင်း၏အုတ်မြစ်ကိုတုန်ခါစေသင့်သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကစတင်ခဲ့သောတော်လှန်ရေးတစ်ခု၏ဘယ်လောက်ဆိုးဝါးသောစားသုံးသူများခေတ်ရေစီးကြောင်းသည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရိုးရာကြော်ငြာအစားစားသုံးသူ -generated စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
Mark ကိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လို့ခေါ်ရတာအရမ်းဝမ်းသာတယ်။ ဒီစာအုပ်ကိုချက်ချင်းကောက်ယူဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုအပေါ်သင်ချက်ချင်းသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။
Marketing Rebellion အကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ
Tags: Mark Schaeferစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပုန်ကန်မှု